Ama-Best X570 Motherboards (Dec. 2020) - Umhlahlandlela Wokuthenga onezibuyekezo - Ukudlala
Usukulungele ukwakha i-PC yakho yokugcina yokudlala, futhi usuvele uyazi ukuthi yikuphi ukucushwa okudingayo, kepha ubambekile ukuthi iyiphi ibhodi yomama okufanele uyilandele, akunjalo?
Ungakhathazeki, sinesixazululo sakho. Silungiselele okuthunyelwe okuphelele okuzokunikeza lonke ulwazi ngamanye amabhodi we-X570 amahle kakhulu akhona emakethe. Wonke lawa mabhodi womama ashiwo ngendlela eyehlayo. Funda lokhu okuthunyelwe ukuze wazi ukuthi yiliphi ibhodi lomama elihle kakhulu okufanele ulithenge.
Uhlu lwe-Best X570 Motherboard Yokusebenzisa ngo-2020:
Ngemuva kokubuyekeza amabhodi womama amaningana sibhale uhlu lwamabhodi womama we-X570 amahle kakhulu okufanele uwagcine. Ngakho-ke nalu uhlu lwe-X570 Motherboard engcono kakhulu:
1. IGigabyte X570 AORUS Elite
IGigabyte X570 AORUS Elite boardboard iza ngesabelomali kanye nepulatifomu yeX570. Kuza nazo zonke izisekelo, kufaka phakathi i-PCI-e 4.0 kuya kwe-PCIe 4.0 N.2 izikhala zokusekelwa, isihlangu esihlanganisiwe se-IO, amasinki amakhulu okushisa amboze i-VRM, kanye nephaneli langaphambili le-USB type-C ukwesekwa, phakathi kwezinye izici. Ukusekela bobabili i-Ryzen 2000 ne-Ryzen 3000 series processors Gigabyte X570 AORUS Elite ibhodi lesibili ku-Gigabyte X570 isitaki somkhiqizo.
Abakwa-Elite bathi banikeza abasebenzisi ipulatifomu elinganiselwe kahle yokwakhela phezu kwayo, enikeza ukuxhumana okwakamuva nendawo egcwele yokulethwa kwamandla ekwazi ukushayela zonke izinqubo zeRyzen 3000. Ukubukeka kweGigabyte X570 AORUS Elite ngandlela thile akuqondakali nge-PCB emnyama yonke futhi okunamathiselwe okuthile kuzungeze usinki wokushisa we-chipset nendawo yomsindo. Ukudlulela kulokho, singabona ukufaka uphawu kwe-AORUS ngakwesokunxele se-VRM heatsink kanye nesembozo esimboza amapuleti e-I / O ahlanganisiwe angemuva.
Konke ukucwilisa ukushisa echwebeni kunesiphetho se-aluminium esine-brushed, ne-chipset heat sink esekela umlandeli omncane kanye ne-AORUS Falcon ehlezi ngokuziqhenya phezulu. Izikhala ze-DIMM ne-PCIe nazo zifanisa ibhodi nezindawo eziyizinsimbi eziyizinsimbi ze-PCIe, ezibizwa ngamaGigabyte ngokuthi yi-Octa Durable PCI-e Armor. Zonke ezinye izixhumi, kufaka phakathi amaphini ayisishiyagalombili ama-APS 24 pin ATX namachweba we-SATA, wonke amnyama. Izibani ze-RGB ziyavela ebhodini, ezitholakala ngaphansi kwesembozo se-I / O se-VRM heatsink, futhi ulayini ohlangothini lwesobunxele ngezansi usetshenziselwa ukuhlukanisa izingcezu zomsindo ebhodini lonke.
Sijabule ngokuthola ngokweqile ukuthola ukuthi leli bhodi lomama elingabizi likwazi ukufeza ini. Ngemuva kokuncipha kancane, i-RX 570 AORUS Elite ikwazile ukukhipha i-Ryzen's 7 3700 X iye ku-4.1 GHz kuma-volts e-1.32; noma yini edlula leli phuzu iveze ukumiswa okusheshayo kokuhlolwa kwengcindezi kwe-AIDA64.
Itheku lifaka amachweba we-6 SATA, ama-PCI-e 4.0 X 4 M.2 slots, eyodwa ene-heatsink, nenombolo enhle yamachweba e-USB, kufaka phakathi amachweba we-USB 3.1 gen amabili emuva nangephaneli langaphambili. IGigabyte X570 AORUS Elite ibhodi elihlukile leX570 emakethe.
2.I-Asus AM4 TUF Gaming X570-Plus iWIFI
I-motherboard yokudlala ye-Asus TUF ingenye yamabhodi abiza kakhulu atholakala kuzingxenyekazi ze-X570 kepha iyakwazi ukufaka imbobo ye-USB Type-C, i-WiFi ne-RGB LED ekhanyisa eduze kwe-chipset heatsink. Ukuhlelwa kwe-Asus TUF kushintshile kusuka ekuvikeleni okunzima kakhulu okwaziwa ngakho esikhathini esedlule futhi kuguqukela kokunye kuya kumabhodi we-centric-centric ngokuvikelwa ezingxenyeni ezithile ezinjenge-PCIe ne-DIMM slots; lezi zinguquko zenze i-Asus AM4 TUF Gaming X570-Plus WIFI ibhodi lesibili elingabizi kakhulu emgqeni womkhiqizo we-ASUS X570.
Ukweqa ngokweqile kule bhodi yomama kuveze i-4.2GHz kusetshenziswa ama-volts ayi-1.3 kungqikithi. Ngasikhathi sinye, ijubane lewashi liphakeme kancane kunalokho okutholwe yi-X570 AORUS Elite kuphela. Lokhu bekungenxa yokusabalala kwe-spectrum necala le-PCL elintantayo; sisebenzise abadlali abaningi abafanayo abangama-42.25. Ngeke siyithole i-RGB ngaphansi kwesembozo se-I / O sepulasitiki, kepha uphawu lwe-TUF lumelwe esihlokweni sazisa wonke umuntu ukuthi ibhodi livelaphi.
Njengamanye amabhodi we-X570, i-Asus TUF yokudlala i-X570 Plus WiFi isekela bobabili ama-processor weRyzen 2000 Ryzen 3000; ifaka amachweba we-8 SATA, ama-4 DIMM Slots akwazi ukuxhasa kuze kufike ku-128 GB ye-DDR4 RAM. Kodwa-ke, ukuxhaswa kwejubane lememori okudlulele ngokumangazayo akukhulunywa.
Indawo ye-PCI-e inezindawo ezimbili ezigcwele ubude nezindawo ezi-2 X1; izindawo zeX1 zigijima ngejubane leX1. Lokhu ukucushwa okujwayelekile kwalolu hlobo lwebhodi, ama-chips we-X 570. I-Asus AM4 TUF Gaming X570-Plus WIFI iyibhodi lomama elinekhono eliqala ngentengo ebiza kakhulu.
3. IGigabyte X570 AORUS PRO WiFi
IGigabyte X570 AORUS PRO WiFi isekela isizukulwane sesibili nesesithathu se-Ryzen CPU, kanti i-APU isebenzisa isokhethi le-AM4. IGigabyte X570 AORUS PRO WiFi inikezwe isigaba se-12 + 2. Izigaba zamandla aphindwe kabili ezigaba eziyisithupha zisebenzisa izigaba zamandla ezingama-48 kufanele zilingane ne-4 ACA etholakala ku-CPU. Ukondla amandla ku-VRM yisixhumi se-EPS esidingekayo esinamaphini ayisishiyagalombili kanye nezikhonkwane ezine zokuzikhethela eziqinisekisa amandla amaningi kula ma-CPU alambile ama-multicore.
Izikhala zememori ezine ku-Gigabyte X570 AORUS PRO WiFi zisekela kufinyelela ku-128GB yememori ye-DDR4 esiteshini esibili futhi ibhekiswe nge-Octa Durable memory Armor, enikeza amandla okusiza ekulweni nokuguquguquka kwe-PCB futhi okusiza ukuvimbela ukuphazanyiswa kwe-ESD. Ijubane lememori lincike kusayizi we-RAM kanye ne-Ryzen CPU, okuwuchungechunge lwama-3000 kuphela olusekela amanani aphezulu kangako.
I-X570 AORUS PRO WiFi inamathuba angama-19 we-USB asukela ku-USB 2.0 kuya ku-USB 3.0 gen 2. Sinamachweba ayi-8 e-USB 2.0 esewonke, amane ngemuva kanti amane atholakala kubhodi yomama. Ngokwandiswa kwe-PCI-e, kunezintambo ezintathu ezigcwele ze-PCI-e 4.0 X16, lapho okuyi-X16 ngogesi futhi yabelana nge-bandwidth ne-slot yesibili yokumiswa kwe-X8 ne-X8. Zombili lezi zinhlayiya zinezikhali ze-Octa Durable PCI-e zamandla angeziwe.
Ekugcineni, i-X570 AORUS PRO WiFi inezindawo ezimbalwa ezikhanyiswe ukukhanya kwe-RGB, umugqa owodwa esihlahleni esikhulu se-I / O nesinye eceleni komugqa wokuhlukanisa umsindo. Ungangeza futhi ukukhanya okwengeziwe kwe-RGB uma ufisa. Izindleko ze-X570 AORUS PRO WiFi.
4. I-MSI MAG X570 Tomahawk
I-MSI MAG X570 Tomahawk ibhodi esezingeni eliphezulu lapho isebenzisa isilawuli se-ISL69247 samasignali ayisithupha sithathwa ngengxenye yeVcool yeVRM bese iphindwe kabili kusetshenziswa izigaba eziphindwe kabili zesigaba se-ISL sika-6617 lezo zigaba eziyi-12 bese zixhuma ezinkanyezini zombukiso eziyishumi nambili ze-ISL99360 futhi izigaba zamandla. Ngokuzenzakalelayo, i-MSI isebenzisa imvamisa yokushintsha i-CPU engu-500KHz kuwo womabili amachweba futhi yakhelwe kuma-volts we-1.2 abaliwe.
I-VRM onqenqemeni lwemidlalo ikhipha ukushisa okungama-watts angama-46, okuchaza ukuthi kungani la machweba eshisa kakhulu uma unikezwa i-3950X edonsa cishe ama-amps angu-170-190 enePBO enikwe amandla. Okwamanje, i-MSI MAG X570 Tomahawk izokhiqiza ama-watts ayi-17 okushisa ngaphansi kwezimo ezifanayo ukwehliswa kwe-60% kokukhipha okushisayo. I-MSI MAG X570 Tomahawk ifaka i-heatsink design efanayo naleyo yomngcele wokudlala, kodwa lokho kulungile.
Sekukonke, i-MSI MAG X570 Tomahawk ibukeka kahle kakhulu, futhi asikho isizathu sokuthi kungani leli bhodi kungafanele libe yibhodi yomama ye-AM4 yesabelomali esingcono kakhulu. I-MSI MAG X570 Tomahawk iyibhodi lomama elihlaba umxhwele kakhulu esilihlolile ngokuqhathaniswa namanye amamodeli akhona. ITomahawk iqeda amabhodi afana ne-X570 yokudlala pro carbon WiFi. Kungcono nje kuwo wonke amapharamitha.
5. IGigabyte X570 AORUS Xtreme
Le bhodi yomama uqobo iyamangalisa ngokuphelele. Imbozwe ngokuphelele kumasinki okushisa ahlomile namapayipi okushisa; mhlawumbe lesi yiso kuphela isizathu sokuthi le bhodi yomama yeX570 ingenaye umlandeli we-chipset. Lokhu kukodwa kuyisici esihle ngoba abalandeli bavame ukukhala kakhulu. IGigabyte X570 AORUS Xtreme ifaka ukuxhumeka okuningi kubo bobabili abalandeli kanye nezihloko zeRGB. IGigabyte ifaka ingqikithi yamakhanda abalandeli abayi-8 emngceleni. Ngakwesokudla phezulu, ibhodi liphinde linikeze izinkinobho ezimbili ezinkulu zokucisha nokusetha kabusha. Lokhu kuyasiza uma usebenzisa leli bhodi ebhentshini lokuhlola.
Njengoba igama layo liphakamisa, leli bhodi lingaya ngokweqile Futhi lakhiwe kuqala futhi okubaluleke kakhulu ngokweqile ngokweqile. Le bhodi yomama ukuphela kwebhodi lomama le-X570 elisebenzisa i-VRM yesigaba se-16. Iningi lamanye amabhodi e-premium athi anokulethwa kwamandla kagesi okuzigaba eziyi-16 ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwabaphindayo. Amandla athunyelwe ngokweqile kweX570 ngenye yezinto ezinhle kakhulu esake sazibona. UGigabyte wenze umsebenzi omuhle impela. I-BIOS Gigabyte nayo iguqukile ngokuhamba kwesikhathi futhi isiyasebenziseka kakhulu. Ukweqa ngokweqile iprosesa kulula kakhulu ngaleli bhodi lomama. Sikwazile ukweqa ngaphezulu leli bhodi i-4.3GHz ngenkathi sisebenzisa amakholoni we-1.4 engxenyeni.
Uma unesikhwama esijulile nesabelomali esandekayo sokwakha kwakho, lapho-ke singancoma kakhulu iGigabyte X570 AORUS Xtreme.
Lokhu bekungukuthunyelwe kwethu okuphelele kwi-Best X570 Motherboard ongayikhetha. Ibhodi lomama ngalinye esilibalile ngenhla ngokunye okuhle kakhulu okwamanje okukhona emakethe. Ungakhetha noma iyiphi yalezi bese uyisebenzisa ekwakhiweni kwakho, futhi i-PC yakho ngeke ize idumale kusukela ekusebenzeni iye kumthamo wayo omkhulu.
Siyethemba ukuthi uthole lokhu okufundisayo futhi kungekudala uzothenga. Uma kunjalo, bese ulahla ukuthi yiliphi ibhodi lomama ozolisebenzisa ekwakhiweni kwakho, futhi uma unanoma yimiphi imibuzo maqondana nebhodi yomama eyi-X570 engcono, bese uyishiya ebhokisini lokuphawula elingezansi.
Amabhodi wamama we-Z390 ahamba phambili weGaming
Izinsizakalo ezihamba phambili ze-VPN - Kuphephile futhi Kuvikelekile
Izibalo zeNetflix (2020) - Imininingwane, Ukusetshenziswa Nemininingwane Engenayo
Ukubuyekezwa kwe-Voicemod Pro - Ingabe Lokhu Kuphephile Ukuyisebenzisa?
ungalawula kanjani i-google home kusuka ku-pc
amawebhusayithi amahle ongaya kuwo
I-android tv vs ibhokisi le-android
ululu akakwazanga ukuqala
1 2 3 bukela ama-movie amasha mahhala
i-youtube converter mp3 yokulanda mahhala